January | 2012 | Ahkeno's Blog
Best Things I ever Had
January 21, 2012 January 21, 2012 ~ ahkeno	~ Leaveacomment
When I was 11 my dad gave me little dog for my birthday Present.When I first got that present I wasn’t happy too much cause I though he(Juliy) was stole my parents love.But he used the place in our family as like another child.Next year later he grow up and he want marry 🙂 Then we brought Susi for him. Susi she is really feminism dog.She love taking photos,she love my Cosmetics 🙂 but she afraid riding car.Next year I adopt Pikapla. And Juliy and Pikpal became friends but it doesn’t take too long,they always fight when they were together.
14 years! we had great time together with them.They are the best presents I ever had.Even some people leave us,they stay with us,they worry for us,they wait till we came back home.
It has been 1 years they leave us.Now they leave with us without saying any GoodBye! I miss you All …
Juliy..The Best things I ever Had
Susi..the best things I ever had
pikapal..Best Things I ever Had
January 18, 2012 January 18, 2012 ~ ahkeno	~ Leaveacomment
January 15, 2012 January 15, 2012 ~ ahkeno	~ Leaveacomment
“Sometimes life is too hard to be alone, and sometimes life is too good to be alone
“creative people always suffer from depression because we're so super sensitive and special?”
Planing for Mozcafe
January 7, 2012 January 11, 2012 ~ ahkeno	~ Leaveacomment
အားလုံးပဲ မင်္ဂလာနှစ်သစ်ပါ။၂၀၁၂ ရဲ့ နှစ်ကူး အစမှာ Myanmar mozillian တွေကိုတွေ့ဆုံဖို့ mozcafe meetup လေးကို ပထမဆုံး စတင် စီစဉ် လိုက်ပါတယ်။
What is mozcafe?
mozcafe ဆိုတာ သူငယ်ချင်း မိတ်ဆွေတွေတွေ့ဆုံနေကြ ကော်ဖီဆိုင်တို့ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်တို့မှာ ကိုယ့်ရဲ့ အတွေ့အကြုံတွေကိုဖလှယ်တဲ့ စကားဝိုင်းပုံစံမျိုးလေးပါ။
ဒီနေရာမှာတော့ mozcafe ရဲ့ အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကလေးကတော့ mozilla ရဲ့လက်ရှိ news/update တွေအကြောင်း နဲ့ ကိုယ်ရဲ့ ရှာဖွေတွေ့ရှိထားတဲ့ သတင်းအချက်အလက်တွေ၊အတွေ့အကြုံတွေကို အချင်းချင်းပြန်မျှဝေကြတဲ့ သဘောလေးပါ။
ယခု mozcafe meetup က Mozilla Myanmar ရဲ့ ပထမဆုံး mozillian တွေရဲ့ တွေဆုံမှုလေးလဲဖြစ်တာကြောင့် Mozilla Myanmar Communtiy ရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်တွေ၊ဦးတည်ချက်တွေ၊နောင်ရှေ့ဆက်လုပ်ဆောင်မဲ့ အချက်တွေကို လည်း ထည့်သွင်းဆွေးနွေးသွားပါမယ်။
ဘယ်သူတွေပါဝင်နိုင်ပါသလဲ(Who can involve?)
အားလုံးကိုနွေးထွေးလှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါတယ်။ Mozilla ကိုချစ်မြတ်နိုးပြီး ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ web ကိုတည်ဆောက်လိုတဲ့ Opensource ချစ်မြတ်နိုး သူတိုင်းပါဝင်ေ ဆွးနွေးနိုင်ပါတယ်။
ဘာတွေကူညီလုပ်ဆောင်နိုင်သလဲ(What can we contribute?)
ဒီမေးခွန်းကို အကီနိုကို တော်တော်များများမေးကြပါတယ်။ အမ ကျနော်တို့က ပါဝင်ချင်ပါတယ် ဘာတွေများလုပဆောင်ဆောင်ပေးရမလဲဆိုပြီး မေးခွန်းလေးတွေတက်လာတိုင်း အကီနို ဒီလင့်ကလေး ကိုပဲ ရည်ညွန်းလိုက်ချင်ပါတယ်။
နောက်ထပ်အခြားသော မေးခွန်းလေးတခုအကီနိုကို မေးထားတာရှိပါတယ် ။ညီမ ရေ အကိုတို့လည်းပါဝင်ချင်တယ် ဒါပေမဲ့ အလုပ်ချိန်တွေနဲ့ပြည့်နေလို ဘယ်လိုကူညီရမလဲ မသိဘူးတဲ့။ဟုတ်ကဲ့ပါ အကီနိုလည်း အချိန်ပြည့် Drupal Developer အနေနဲ့ အလုပ် လုပ်ကိုင်နေတဲ့အတွက် သက်သက်အချိန်ပေးပြီး အပြင်ထွက် မကူညီနိုင်တဲ့ ပွဲတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ နေ့စဉ်အသုံးပြုနေတဲ့ ဒီ web ပေါ်ကနေ အကီနိုနေ့စဉ်ကူညီနိုင်တာလေးတွေရှိပါတယ်။ ဒါတွေကတော့
If you are creative artists and designers,you can join here: http://creative.mozilla.org/
If you are love Localization and want to spread your language to ordinary people through OpenSource Browser ,you can join herehttps://wiki.mozilla.org/L10n:Home_Page
There are so many ways you can join with us
ဒါကြောင့်မို့ အားလုံးတွေ့ဆုံ ဖို့ ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။
If you want to know more about Mozilla Myanmar and want to involve drop my mail ahkeno@gmail.com or connect with our Facebook Page,Twitter.Faceook Mozilla Myanmar Twitter @MozillaMyanma
January 3, 2012 January 16, 2012 ~ ahkeno	~ Leaveacomment